Taasi waa Blog! | ThatsLuck.com
La daabacay: 14 / 02 / 2020
Ku guuleysiga qamaarka tooska ah ee sharadka tooska ah Sugitaanka bastard-kan coronavirus inuu ugu dambeyn ka soo baxo sanduuqa, maanta ThatsLuck Waxaan ka hadlayaa sida loogu guuleysto qamaarka internetka ee sharad toos ah. Qaabkan sharadka, sida magacu tilmaamayo, wuxuu kakooban yahay sharad si toos ah adigoo daawanaya ciyaar. ... Akhri wax kasta
La daabacay: 17 / 03 / 2020
Waa maxay natiijooyinka qayb ahaan iyo ugu dambeeya? Sharad ku saabsan natiijada qeyb ahaan iyo ugu dambeysa ee ciyaarta kubbadda cagta waxay ka kooban tahay dhigista sharad isku dhafan natiijada dhamaadka qeybta hore iyo dhamaadka ciyaarta. Tusaale ahaan, haddii aad sharad ku gasho in kooxda guriga joogta ay ka horreyn doonto labada qaybood ... Akhri wax kasta
La daabacay: 09 / 02 / 2020
Sida loo furo goobaha sharadka la xanibay adigoon bedelin dns-ka kaarka shabakada ama router Runtii ma loo baahan yahay in la beddelo dns-ka kaarka shabakadda si loo furo goobaha khamaarka xiran? Waxqabadka ka horjoogsiga adeegsadayaasha internet-ka ee talyaaniga inay galaan goobaha aan loo idmin inay wakaaladda ka soo uruuriso sharad ayaa soo jirtay dhowr sano ... Akhri wax kasta
Ku guuleysiga labalaabka Roulette: Goorma La Joojinayaa?
La daabacay: 09 / 03 / 2020
Dalbo istaag si aad ugu guuleysato labalaabka roulette Xaqiiqdii miyaad ku guuleysan kartaa labalaabka roulette? Haddii aan ka hadalno tan waa inaan si dhakhso leh u caddaynnaa qodobbada qaarkood, maxaa yeelay jawaabtu waxay in badan ku xiran tahay hadafkaaga sidoo kale waqtiga. Stopwin, stoploss, waa ereyo aan ka aqrinayay golayaasha sharadka muddo ka badan 20 sano, ... Akhri wax kasta
Nidaamyada lagu guuleysto roulette: run ahaantii ma shaqeeyaan?
La daabacay: 20 / 04 / 2020
Maxay yihiin nidaamyada roulette ee run ahaantii shaqeeya? Ma jiraan nidaamyo roulette oo runtii shaqeeya? Ciyaarta roulette waxay u badan tahay inay jirtay muddo ka dheer ciyaar kasta oo khamaar kale, iyo sababtoo ah waxaa jira habab badan oo kala duwan oo lagu dhejiyo sharad, boqolaal nidaamyo kala duwan ah ayaa ay abuureen ciyaartoy adduunka oo dhan qarniyo badan. ... Akhri wax kasta
Ku kasbo lacag sharad adigoo sharad ku sameynaya kooxda martida ah
La daabacay: 14 / 01 / 2020
Ku kasbato lacag khadka tooska ah ee sharadka kooxda martida ah Sidee ayey kuwa sameeya lacagta qamaarka internetka iyagoo sharad ku gala guusha kooxda martida ah? Ku warwareega khadka internetka Waxaan inta badan la kulmaa maqaallo ama qoraallo ku saabsan sharadka oo aan ku keydiyo waxyaabaha ugu caansan shabakadeyda, iyadoo ujeedku yahay inaan ku soo laabto sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aan u sii xoojiyo waxyaabaha ku jira. Mid ka mid ah kuwan ... Akhri wax kasta
Habka kor iyo hoos ee sharadka khadka tooska ah
La daabacay: 15 / 02 / 2020
Qaabka Sharad-bixinta & Kordhinta Habkan shaashadda kor iyo hoos wuxuu ka kooban yahay kordhinta ama yareynta saamigaaga markii bankroll-ku gaaro heer la sii cayimay. Tusaale ahaan, bankroll-kaagu waa 100 cutub oo waxaad ku sharraxeysaa 10% ka mid ah illaa wadarta ay ku kordhayso 25%, illaa ... Akhri wax kasta
Sida loogu guuleysto khadka tooska ah ee Blackjack
La daabacay: 24 / 04 / 2020
Ku guuleysiga khadka tooska ah ee internetka blackjack qoraalkan cusub waxaan kula hadlayaa sida loogu guuleysto khadka tooska ah ee blackjack, laakiin ma sameyn doono anigoo tixraacaya hababka caadiga ah, waxaad ka heli kartaa kuwa khadka tooska ah uga jira meel kasta. ThatsLuck Xaqiiqdii maahan 'meelwalba', taasi waa sababta aan isla markiiba u bilaabo inaan ku xasuusiyo inaad iska qorto kanaalka ► YouTube, halkaas oo aan rajeynayo ... Akhri wax kasta
Nidaamka sharadka: sida loo daboolo xarkaha
La daabacay: 15 / 01 / 2020
Maxaa loo daboolayaa xarigga? Nidaamkan lagu daboolayo isku aadka sharadka ayaa ka kooban sharad lagu taageerayo guusha mid ka mid ah kooxaha iyo in la daboolo isku aadka, si haddii labada koox ay barbaro u dhacdo aanad waxba u lumin. Sidan ayaad naftaada uga ilaalinaysaa nasiib xumada ama duruufaha gaarka ah, ... Akhri wax kasta
Taariikhda roulette: asalkeeda ilaa maanta
La daabacay: 25 / 06 / 2020
Taariikhda roulette: asalka Taariikhda (dhalashada) roulette waxay soo jirtay in ka badan laba kun oo sano ka hor, si sax ah waqtiyadii Roomaankii hore; dhab ahaantii waxay u muuqataa in guutooyinkii Roman-ka ay gaashaan ahaan u adeegsadeen sidii rooti aan caadi ahayn, kaas oo ay ku rogeen caarada waran. Reer baadiye, ma ahan kuwo u janjeera inay ciyaaraan marka loo eego halyeeyada, laakiin waa iska cadahay ... Akhri wax kasta